वाणिज्य बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिना धिताे १५ लाखसम्म ऋण दिने, यसरी दिनुहोस् आवेदन? – Paluwa Khabar
साउन ११, २०७८ सोमबार 178
उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि नवप्रर्वतन प्रस्ताव आह्वान (Start–up Ideas Call) कार्यक्रम सुरु भएको छ। सरकार, वित्तीय संस्था र नीति क्षेत्र बीच त्रिपक्षीय सहमति अनुसार बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा नवप्रवद्र्धन प्रस्ताव आह्वान (Startup Idea Call) कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्।
काठमाडौंमा बुधवार आयोजित समुद्घाटन सत्रमा वेबसाइट र भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समुद्घाटन गरेका हुन्।
Prevनि’ षेधाज्ञा बारे फेरी एकाएक आयो यस्तो सुचना, आखिर कहिलेबाट लकडाउन? हेर्नुहोस्
Nextआजदेखि यति दिन थपियो नि’ षेधाज्ञा, के के खुल्छ के के खुल्दैन? हेर्नुहोस् (आदेशसहित)
नेतृत्व नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसकाे प्रभाव पर्नु स्वभाविकः प्रधानमन्त्री ओली
आकाशबाट खसे १५ सयभन्दा बढी चरा: के फेरि आएको हो नयाँ सं,कट हेर्नुहोस्।